Izindaba - Kungani abantu bokufika bengasebenzisi ipali uma bedoba? Bathanda ukusebenzisa izinsimbi zokudoba!
Kungani abantu bokufika bengasebenzisi isigxobo lapho bedoba? Bathanda ukusebenzisa izinsimbi zokudoba!
E-China, basekhona abadobi abaningi abasasebenzisa indlela yendabuko yokudoba, kepha ayikho induku yokudoba phesheya, futhi bakhetha ukusebenzisa izinsimbi zokudoba ukudoba. Siyini isizathu? Kungani kunomehluko ongaka? Okulandelayo, landela i-KK ukuhlola!
1, Ukudoba endaweni
I-reel yokudoba ingenza ukusakaza okude, futhi ububanzi bokudoba bukhulu kakhulu, futhi ukujula kokudoba kujulile. Ububanzi bokudoba kwesigxobo sesandla buncane, okulungele kuphela ukudoba osebeni, futhi ukujula kuncane kakhulu.
2, Izimo zemvelo zokudoba
Isondo lokudoba lingadoba ngokujwayelekile emanzini nangomoya namagagasi, futhi kunzima ukubona ushintsho lokuntanta lapho isigxobo sesandla sikumoya namagagasi, okuthinta kakhulu umphumela wokudoba.
3, Inani imishini
Kubukeka sengathi induku yokudoba idinga kuphela induku, ulayini, iflothi, ihuku kanye nesithiyelo. Eqinisweni, idinga ezinye izinto eziningi. Labo abadlale ngenduku yokudoba bayiqonda ngokujulile.
Kulula kakhulu ukusebenzisa isondo lokudoba ukudoba. Inqobo nje uma unenduku, ulayini nesithiyelo, ungagagada yonke indawo.
4, Imvamisa yokusetshenziswa kwesithiyelo
Izithiyelo ezisetshenziswa ngamasondo okudoba ukudoba ngokuvamile zinkulu futhi azidingi ukushintshwa njalo. Uma kusetshenziswa izicupho ezingamanga, zingasetshenziswa kaninginingi. Isithiyelo esisetshenziswe esigxotsheni sesandla sincane kakhulu futhi sidinga ukungezwa njalo.
5, inqubo yokulinda
Ama-reels okudoba imvamisa ahlulela ukuthi kukhona yini ukulunywa yizinhlanzi ngomsindo wensimbi, futhi inqubo ayikhululekanga. Kepha isigxobo sesandla sidinga ukugqolozela ukuntanta ngaso sonke isikhathi, okulula ukudala ukukhathala okubonakalayo kwamehlo.
6, Ngokombono Technology
Kunemigqa eminingi yokudoba esondweni lokudoba, elingadlala umphumela omuhle wokukhipha amandla futhi lenze izinhlanzi kungabi lula ukuqaqa
Umugqa wokudoba wesigxobo sesandla ulungisiwe. Lapho ibhekene nenhlanzi enkulu, ikhipha kakhulu amandla ngamakhono nokusebenza kwenduku yokudoba, enezidingo eziphezulu zobuchwepheshe.
7, Kusukela engela ukuzijabulisa
Lapho inhlanzi enkulu isesondweni sokudoba, ungazizwa ngokuphelele inqubo yokulwa, esebenza kakhulu. Lapho udoba inhlanzi enkulu endukwini yokudoba, kuya ngamandla anekhono, futhi inqubo ayenzi lutho.
Kukhona neqiniso lokuthi izikebhe zokudoba zifuna izinhlanzi ngokuzenzakalela esikhundleni sokulinda ukuthi izinhlanzi zilume, kepha ukudoba ngezinduku akwenzi lutho kulinde izinhlanzi ukuba zilume.
8, Ngokombono wezinhlanzi ezihlosiwe
Kunobudlelwano obuthile phakathi kokuthi kungani kungekho cishe ukudotshwa ngenduku yokudoba emazweni angaphandle kanye nezinhlanzi eziqondiwe. Emazweni angaphandle, iningi lazo liyizinhlanzi ezinkulu ezidla ezinye, futhi ukudoba ngezikebhe zokudoba kuzwakala kakhulu. Ngaphezu kwalokho, amazwe angaphandle ngokuvamile anemithetho edinga ukuthi ikhishwe lapho kudotshwa izinhlanzi ezincane.
Injongo enkulu yenduku izinhlanzi ezincane, ukudoba okuningi, kunokuba kudotshwe "ukuzijabulisa"!
Ngokuvamile, abadobi basekhaya bavame ukuthatha ukudoba njengendlela yokuhlakulela ukubekezela nokuhlakulela imizwa, kuyilapho abadobi bakwamanye amazwe begxile kwezokuzijabulisa, futhi inqubo ilula futhi iqondile. Kodwa-ke, ngokuthandwa kukaLuya eChina, bayanda abadobi abaphendukela eLuya ukuyodoba. Kancane kancane, banaka kakhulu ukuthi babamba malini futhi bathatha ukudoba njengokuzijabulisa esikhundleni sokudoba.